Amandla emakethe weQingdao carbomer makhulu. Kutholakala ukuthi eminyakeni emihlanu ezayo, kuzoba nemakethe yuan eyizigidi eziyizinkulungwane eziyi-10.34 ezothuthukiswa ngo-2025. Okulandelayo, ake silandele izinto ezintsha zeQingdao yinuoxin
ICarbomer iyi-homopolymer ye-acrylic acid, i-crosslinking noma ihlangana nanoma iyiphi yama-polyols allyl ethers amaningi. Le nhlanganisela imvamisa iyimpuphu emhlophe, esetshenziswa njenge-ejenti yokuqina kanye ne-emulsion stabilizer. Idume ngokusetshenziswa kwayo embonini yezimonyo futhi inokusebenza okusebenzayo emikhakheni yezokwelapha neyezempilo. Ama-ejensi amaningi akholelwa ukuthi zonke izinhlobo zamakhemikhali ziphilile kakhulu, yize ezinye zezinto ezisetshenziselwa ukunciphisa i-pH yazo zingaba yinkinga.
Eminyakeni embalwa edlule, imakethe yomhlaba ye-carbom ikhule ngokushesha, ngezinga lokukhula lonyaka eliyi-11.98. Imali engenayo yomhlaba kaKapom icishe ibe yizigidi ezingama-736 zamadola aseMelika, futhi umthamo wayo wokuthengisa uqobo ungamathani angama-57600.
Ukuhlukaniswa kwe-carbomer kufaka phakathi i-carbomer 940, i-carbom 980, i-kapom 934, njll., Futhi inani le-carbomer 940 ngo-2018 cishe liyi-37.
ICarbomer isetshenziswa kabanzi emithini yokwelapha, ukunakekelwa komuntu siqu nezimonyo. ICarbomer isetshenziselwa ukunakekelwa komuntu siqu nezimonyo, cishe ama-54%.
Isifunda sase-Asia Pacific yizwe labathengi elinesabelo semakethe cishe sama-55.4. Ngaphezu kwalokho, iNyakatho Melika neYurophu zinezilinganiso ezifanayo, ezibala u-14.3 no-17.8 ngokulandelana kwemakethe yabathengi
Ikhono lokuthuthukisa imakethe likhulu. Ngabe uke walibamba ithuba lemakethe le-carbom? Abakhiqizi abakhulu beQingdao kapom bakwamukela ukuthi uvakashele inkampani yethu futhi nixoxe ngezinto zokubambisana.